बागमती प्रदेशमा परिसंघको कार्यालय स्थापना, सर्वसम्मतरूपमा नयाँ नेतृत्व चयन - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
बागमती प्रदेशमा परिसंघको कार्यालय स्थापना, सर्वसम्मतरूपमा नयाँ नेतृत्व चयन
काठमाडौँ / बागमती प्रदेशमा ‘बागमती प्रदेश उद्योग परिसंघ’ स्थापना भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा शुक्रबार प्रदेश कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन् ।
प्रदेश उद्योग परिसंघ स्थापनाको अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले साना तथा मझौला उद्योगलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले औद्योगिक विकास विना अर्थतन्त्रको दीगो विकास असम्भव रहेको बताए ।
नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न परिसंघले मेक इन नेपाल – स्वदेशी अभियान अघि बढाएको भन्दै उनले यस अभियानलाई सफल बनाउन प्रदेशका सम्पूर्ण उद्योगीहरूलाई आग्रह गरे । परिसंघले सबै किसिमका उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न थालेको भन्दै उहाँले प्रदेशले पनि अब उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले हरेक प्रदेश र औद्योगिक घनत्व धेरै भएका जिल्लाहरूमा परिसंघले आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै जाने उल्लेख गरे ।
बागमती प्रदेश उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरेले प्रदेश कार्यालय स्थापनाका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए ।
बागमती प्रदेश उद्योग परिसंघमा भेषराज दुवाडीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। कार्यसमितिको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा लेखराज पोखरेल र उपाध्यक्षहरूमा त्रिलोचन कँडेल, स्वागतराज प्याकुरेल र हरिप्रसाद भट्ट छन् ।
प्रदेश उद्योग परिसंघको सदस्यहरूमा शरदचन्द्र भट्टराई, शिरोमणि प्याकुरेल, श्रृजन कोइराला, स्वागतराज प्याकुरेल, श्रीहरि मास्के, सुयशराज पराजुली र दुर्गाप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। यसैगरी डा. प्रमोद लामिछाने, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, धिरजकुमार कार्की, विष्णुप्रसाद पौडेल, दिवस न्यौपाने र बद्रीनाथ शर्मा सदस्य भएका छन् ।
साधारणसभामा बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले औद्योगिक क्षेत्र विकासको काम अघि बढाउने उल्लेख गरे ।
उनले परिसंघले अघि बढाएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा प्रदेश सरकारको साथ रहने जानकारी पनि गराए। मुख्यमन्त्री शाक्यले लघु, घरेलु तथा सना उद्योगको विकासमा प्रदेश सरकारले काम गर्ने पनि बताए ।
साधारणसभामा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले अहिलेको अवस्थामा बढ्दो ब्याजदर उद्योगीका लागि चुनौतिको विषय भएको उल्लेख गरे । उनले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।
उद्योग परिसंघ र बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतबीच भेट, यस्तो भयो छलफल
आयकर विवरण बुझाउने म्याद थप गर्न परिसंघको आग्रह
उद्योगीको प्रश्न अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई – कोभिड–१९ ले शिथिल अर्थ व्यवस्था कसरी फर्काउने ?
विश्वको दोश्रो अग्लो ‘माउन्ट के टू’ आरोहण गर्ने पुर्जाको टोलीलाई उद्योग परिसंघको बधाई तथा स्वागत
मेक इन नेपालको बहसमा उद्योग परिसंघः अर्थतन्त्र उठाउन स्वदेशी उत्पादन